गिरफ्तार र्‍यापर भिटेनका १० रोचक तथ्य - मनोरञ्जन - नेपाल
भिटेन। फाइल तस्बिरः नेपाल
र्‍यापर भिटेनको पछिल्लो हिट गीत हो, ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो...।’ स्वच्छन्द शैलीको यही गीतले उनलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याएको छ । बिहीबार जाउलाखेलबाट पक्राउ गरेपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले भने, ‘गीतका शब्द र फेसबुकमा राखिएको तस्बिरका कारण भिटेनलाई पक्राउ गरियो । अब अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइन्छ ।’
र्‍याप गीतको मर्म र विशेषता नबुझी भिटेन पक्राउ गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो । प्रहरीले स्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । केही दिनअघि ‘तिहार...’ शीर्षकको गीतकै कारण गायक दुर्गेश थापा यस्तै नियतिको सिकार हुनुपरेको थियो । युट्युबबाट गीत हटाएपछि मात्र दुर्गेश हिरासतमुक्त भए ।
दुई गायकको पक्राउ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार कति अनुदार हुँदैछ भन्ने प्रमाण हो । प्रहरीचाहिँ गायक समातेर ठूलै उपलब्धि हासिल गरेझैँ गर्दैछ । यसो हुनु भनेको सरकारप्रतिको वितृष्णा अझ उकासिनु हो तर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रहरीको यस्ता हर्कतको बचाउ गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने, ‘परिवारसँग बसेर उनी (भिटेन) ले गाएको गीत सुन्नुस् । कतिको समर्थन राख्नुहुन्छ ? कि, अनुहार लाजले रातोपिरो हुन्छ ?’
मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले र्‍याप गीतको आधारभूत मान्यताको समेत जानकार नभएको त स्पष्ट भएको छ, सँगै भिटेनप्रति थप कडा हुन प्रहरीलाई बल पुगेको छ । तर लाखौँ फलोअर्स भएका भिटेन को हुन् ? उनी कसरी युवापुस्ताको ढुकढुकी बने ?
मूलधारका मिडियाबाट प्राय: टाढा रहने भिटेनबारे १० रोचक तथ्य :
१) भिटेन अर्थात् समीर घिसिङ
भिटेनको खास नाम हो, समीर घिसिङ । गृहजिल्ला रौतहटमै छँदा उनको एउटा खलासी साथी थियो । ती टुहुरो साथीलाई खान–लाउनै धौधौ हुन्थ्यो । तर समीरसँग आत्मीय सम्बन्ध गाँसियो । उनैले समीरलाई ‘भिटेन’ भनेर बोलाउँथे । अलिपछि त्यो साथी हराए, कहिल्यै पुन: सम्पर्क भएन । त्यसैले त्यही साथीको सम्झनामा आफ्नो ‘स्टेज नेम’ नै भिटेन राखे । उसकै यादमा ‘खलासी...’ शीर्षकको गीत पनि गाएका छन् ।
२) पहिलो गीत ‘गरिब...’
भिटेन गरिब परिवारमा हुर्किए, किशोरवयबाटै खानकै लागि संघर्ष गर्नुपर्‍यो । उच्च शिक्षा पढ्न पाएनन् । आर्थिक विपन्नताको आफ्नो भोगाइ पोखेर ‘गरिब...’ गीत गाए । यही उनको पहिलो रेकर्डेड गीत हो, जसका शब्द र गायकीले उनलाई र्‍यापका पारखीमाझ चिनायो ।
३) थाङ्कादेखि र्‍यापसम्म
१६ वर्षकै उमेरमा घर छोडेर भिटेन एक्लै काठमाडौँ आए । बाँच्नकै लागि थाङ्का पेन्टिङ गर्न थाले । त्यतिबेला अन्डरग्राउन्ड र्‍याप पनि गर्थे तर बाहिर आउन सकिरहेका थिएनन् । भूकम्पपछि उनले थाङ्काको काम पाउन छोडे । “कोठाभाडा तिर्न सकिनँ, बिहान खाए, बेलुका के खाउँ हुन्थ्यो । कैयौँ दिन साथीहरूसँग शरण लिएँ,” गत वर्ष नेपालसँग उनले भनेको थिए, “त्यसपछि जे पर्ला–पर्ला भनेर र्‍यापमै लागेँ । कम्तीमा पेट नभरिए पनि मन त भरिन्थ्यो ।” यो निर्णय नै उनको जीवनको टर्निङ पोइन्ट बनिदियो । त्यसपछि उनका गीत भटाभट हिट हुन थाल्यो ।
४) गिरिशको 'ग्रुम'
भिटेनलाई ‘ग्रुम’ गरेका हुन्, गिरीश खतिवडाले । युट्युबमा गीत हेरेपछि नेपाली र्‍यापका प्रणेता मानिने गिरीश आफैँले भिटेनलाई सम्पर्क गरेका थिए । त्यतिबेलै गिरीशले दाबी गरेका थिए, ‘नेपाली र्‍यापको अबको तारा भिटेन नै हुन् ।’ गीतमार्फत भिटेनले यसलाई पुष्टि गर्दै लगे ।
५) ‘डि–१२’ ट्याटु
खासमा गिरीश खतिवडा र एड्रेका गीतले नै हो, भिटेनलाई र्‍यापमा आकर्षित गरेको । अलिपछि इमिनेमका गीत सुन्न थाले । इमिनेमबाट यति प्रभावित भएका कि हातमा ‘डि–१२’ ट्याटु खोपाएका छन् । त्यो इमिनेमको क्रिउको नाम हो । इमिनेमकै एल्बम ब्याड मिट्स इभिलकोसमेत ट्याटु बनाएका छन् ।
६) ‘हेटर्स’ पनि
भिटेनको फ्यान मात्र होइन, ‘हेटर्स’ पनि छन् । स्याडी पोपट र डिजे सेभेनले भिटेनविरुद्ध ‘डिस सङ’ नै गाएका छन् । र्‍यापरको उल्लीबिल्ली गर्दै गाइएको गीतलाई ‘डिस सङ’ भन्ने गरिन्छ । यही गीतले नै युट्युबमा १८ लाख भ्युज पाएको छ ।
७) स्टेजमै ढुंगा
भिटेन र विवाद पर्यायजस्तै हुन् । गत वर्ष पुसमा पोखरामा कन्सर्ट गर्दा–गर्दै उनीमाथि ढुंगा प्रहार भयो । उनलाई जोगाउनै हम्मेहम्मे पर्‍यो । केही समयपछि उनले ‘हेटर्स’ प्रति आक्रोशित हुँदै ‘साइफर...’ गाए । यो गीत युट्युबमा हेर्नेको संख्या ८० लाख नाघेको छ । त्यस्तै, उनको ‘सिमसिमे पानीमा...’ बोलको गीत युट्युबमा अपलोड भएको २४ घन्टा नबित्दै ट्रेन्डिङमा आयो तर रेखा शाहले कपीराइट दाबी गरेपछि युट्युबबाट हटाउनु पर्‍यो ।
८) ‘नयाँ यमबुद्ध’
यमबुद्धको देहान्त हुनु र भिटेन चम्कनु करिब–करिब एकै समयमा भयो । यमबुद्धका गीतझैँ भिटेनका गीतहरू पनि गहन हुन्छन् । त्यसैले कतिपयले भिटेनलाई ‘नयाँ यमबुद्ध’ भन्ने गर्छन् । भलै उनी आफू कुनै कोणबाट यमबुद्धसँग तुलना गर्न लायक नभएको तर आफूले यमबुद्धको शोकलाई शक्तिमा बदल्न खोजेको बताउँछन् । उनको आगमनपछि लाउरेजस्ता चर्चित र्‍यापर पनि ओझेलमा परेको विश्लेषण गरिन्छ ।
९) शब्दको एक्स्प्रेसन
भिटेन आफूले गाउने गीत आफैँ लेख्छन्, त्यो पनि निश्चित थिममा । र्‍याप हान्दा शब्दको भावअनुसार‘एक्स्प्रेसन’ दिन्छन् । रिस पोख्दा ठूलो आवाज निकाल्छन्, पीडा पोख्दा मधुर स्वर । यसले गीतलाई जीवन्तता दिने र सुन्नेले शब्द–शब्दलाई अनुभूत गर्ने बुझाइ छ, उनको ।
१०) सन्देशमूलक संगीत
प्रहरीले उनका गीतका शब्द अभद्र भएको आरोपमा मुद्दा चलाउँदै छ तर उनले युवामा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने कयौँ सन्देशमूलक गीत गाएका छन् । नपत्याए, ‘बैनी...’, ‘लफंगा...’, ‘चुरोट...’, ‘हालखबर...’, ‘कथा...’ ‘मान्छे खत्तम...’ सुन्दा हुन्छ ।
ट्याग: भिटेनअभिव्यक्ति स्वतन्त्रतार्‍यापरर्‍याप गीत